Safar iyo daweeyn mar qura ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mia Fahlén oo baratay cilmi-nafsiga oo taksi ku qaabileeysa shakhsi. Sawirle: Liv Heidbüchel/Radio Schweden)
Safar iyo daweeyn mar qura ah
Dad aan ku dhiiradeen ayay u sahlaysaa
La daabacay fredag 7 november 2014 kl 16.00
Safar ayaad meel u aadaysaa. Waxaad carbuunatay taksi si ay kuugu sahlanaato inaad wakhtiga dhowrto. Sidoo kale waxaad taksiga aad carbuunatay la socda dhakhtar ku howl-gala cilmi-nafsiga,ahna howl-wadeennada wax ku daweeya wada sheekeeysiga iyo in dhibaatooyinkaaga la dhageeysto. Maxaad ka oran lahayd.
Toddobaadkan eynu ku jirno ee gebagebada ku sugan ayay shirkada ka mid ah shirkadaha takaasida ee magaalada Stockholm ay ku tallaabsatay qorshe lagu suurtagelineyo in la carbuunto shakhsi bartay culuunta ku daweeynta la sheekeeysiga shakhsiga, waxa loo yaqaanno "terapi" muddada aad saaran tahay dhaca. Idaacadda Radio Sweden ayaa u dhaqaaqday sidii ay amuurtaa uga gun gaari lahayd iyo dhabbooyinka magaalada Istockholm iyada oo ey gaariga taksiga wada saaran yihiin Mia Fahlén:
- Runtii way ka xiise badan tahay sidii aan moodayay. Waayo waxaa la dareemeyaa in la wadaago xiriir dhow oo xanxanto leh. Caadiyan marka aan xafiiska ka shaqeeynayo kursi ayaan ku fadhiyaa adiguna fadhi kale ayaad ku fadhisan lahayd, waxaa noo dhaxeeyn lahaa miis iyo nal yar oo miiska saaran. Iyada oo lagu jiro xaalad sidii dad aan aqoon ballaaran isu lahayn. Halka way ka yara duwan tahay. Waxaan oran karaa inaan si ka degdeg badan ugu soo dhowaaday dadyoowga aan la sheekeeysaneyo sidii aan u daweeyn lahaa maadaama aannu isugu dhow-nahey fadhiga.
Qiime la mid ah midka taksiga lagu raaco ayaa inta lagu guda jiro toddobaadkan lagu dalban karaa safar taksi iyada oo lagu dhex heli karo taksiga dhakhtar cayimad ee bartay culuunta daweeynta ku dhisan la sheekeeysiga shakqsiga ee maskaxda. Wuxuu taksigu kuugu iman goobta aad dooneyso in lagaa soo kaxeeyo laguna geeyneyo halka aad ku socoto, halka ey howl-wadeenka iyo dareewalka taksiguna saxiixa ku duugeen inaaney cid kale gaarsiin karin sheekada idin dhex-marta "tystnadsplikt". Sida ku cad xayeeysiinta ayaa qorshahan loogu talo galay hab ay bulshada kadeedan ee reer Istockholm u isticmaalaan xilliga ey taksiga saaran yihiin howl manaafaco u leh.
Ururka shaqaalaha ee dhakhaatriirta maskaxda ayaa ka biyo diiday falkaa, isagoona sheegay inaan middaa lagu tilmaami karin daweeyn, maadaama daweeynta la sheekeeysiga lagu qabtaa tahay mid wakhti u baahan. Hase yeeshee ay Mia Fahlén aanay sidaa u arag middaa:
- Waxay xoogaa albaabka u fureeysaa inay dhalkhaatiirtan la hadlaan dadyuoow aan horay diyaar ugu aheyn la kulanka dhakhtar cilmi nafsiga bartay. Waxaan rajeeyn in cidda taksiga ku dalbata oo kolka ay soo gasho kaga soo dhowaadaan oo lagu dhiirado fal aan la hubin in haddii kale lagu dhiirankari lahaa. Waxaa dhici karta inaan la ogsooneyn in caawinaad loo heli karo dhibaatooyinka ruuxa haya, waxaanan middan ku misaalayaa in su'aal loo diro barnaamijka dhakhtarka cilmi nafsiga ama su'aalaha bulshada ee war-geeys.
Mia Fahlén waa dhakhtarad baratay cilmi nafsiga oo caadiyan ka howl-gasha shirkad daweeysa dadyoowga ey la soo gudboonaadaan dhibaatooyinka kadeedyada kala duwan. Halka wada xaajoodka taksiga dhexdiisa ka dhacayana la xiriireen dhibaatooyin aan sidaa u cuslaeyn:
- kulammada aan illaa hadda la qaatay ayaa ku saabsanaa welwel ama welbahaarka laga qabo inaan howl laga gun gaarin, dhibaatooyinka la xiriira shaqada, ama xiriirka labada ruux. Weli lama aanan kulmin shaqsi qaba dhibaatooyin waaweyn ee maskixiyan ah. Haddiise ay ila soo gudboonaato, waxaan ku fekerayaa in maadaama aaney dadyoow badani wax war ah ka heyn halka ey dhibaatooyinkooda taageero uga heli karaan iyo inaan middaa ka taakuleeyn kari lahaa. Aan niraahno inaad iila timaado inaad dhibaato ku qabto hurdada, waxaan markaa u sheegi karaa inay tahay howl ay bukaan-socoddada xaafaddu ku shaqa-leeyihiin. Waxaad kala xiriiri kartaa dhakhtarkaaga xaafadda aad ku dhaqan tahay. Ka war doon iney dhakhaatiirta maskaxdu ka howl-galaan bukaan-socodka xaafaddaada. Waxaa laga yaabaa inay jiraan koox qaabil-san dhanka caqabadaha hurdada. Waxaan ku hagi karaa halka taageerada loo doonan karo.